Shirkadaha Da'da ee Da 'weyn oo leh Astaamaha Dhismaha
Sharciga wuxuu leeyahay shirkad waa “shakhsi” sharci ah oo ka duwan milkiileyaasheeda. Da'da milkiileyaashu maahan inay u dhigmaan da'da shirkadaha. Marka Shirkadda HJ ​​Heinz ay xayeysiiso in la aasaasay 1869, micnaheedu maahan in dhammaan saamileyaashu ay si fiican u dhaafeen 100 sano. Waxay si fudud macnaheedu tahay in shirkadda la xareeyay sannadkaas. Waad uga faa'iideysan kartaa faa'iidooyinka kalsoonida ee la midka ah markaad xayeysiineyso macaamiisha.
Da'da shirkaddaadu waxay siin kartaa kalsooni weyn macaamiisha iyo deyn bixiyeyaasha marka loo eego meheraddii dhowaan la aasaasay, gaar ahaan haddii muddada ganacsiga aad ku jirtay ay la mid tahay da'da shirkadda aad soo iibsatay. Tusaale ahaan, aynu ka soo qaadno inaad ku jirtay beerta tuubbooyinka sanadihii 12. Qareenkaaga iyo xisaabiyuhu waxay kugula talinayaan inaad ku darsatid ilaalinta mas'uuliyadda iyo keydinta canshuurta. Marka, waxaad heleysaa shirkad da 'da ah oo ah 12 sano jir oo u dhiganta xaddiga waqtiga aad meheradda ku jirtay. Sidan, marka aad xayeysiiso inaad meherad ku jirtay tobannaan sano, haddii macaamil suuragal ah uu iska kaa dhigto shirkad, waxay arki doonaan in taariikhda shirkadaada soo xareysay ay la mid noqon doonto waqtiga aad runtii ganacsi sameysay.
Sidoo kale, helitaanka shirkadaha iyo meheradaha kale ee firfircoon ee leh amaahda aasaasiga ah iyo khadadka amaahda ee hadda jira iyo sidoo kale adkeynta amaahda shirkaddaada waxay ganacsatada siineysaa kobcin dhaqaale oo weyn. Waxaa mas'uul ka ah in la ogaado in da’da xaqiiqadu aysan ahayn qodobka kaliya ee amaahda iyo kalsoonida ganacsiga waxaanan kugula talineynaa siidayn buuxda illaa iyo taariikhda aad qaadatay shirkadda da’da ah.
Waxaan leenahay barnaamijyo aad u jaban oo si dhaqso leh u caawin kara helitaanka dhibcaha ganacsiga.
Ka taxaddar ururada maanta iyo da'da sheegaya in aad ka heli karto shirkad horay u haysatay khadadka amaahda. Haddii aad rabto inaad iibsato shirkad da 'ah, na soo wac. Markaad hesho kadib waxaan kaa caawin karnaa inaad dhisi karto sumcadiisa.
Shirkadaha Incorporated waxay bixiyaan shirkado badan oo noocaas ah iyo LLC. Waxaa jira shirkado waaweyn oo duqoobay oo da 'weyn Nevada shirkadaha, shirkadaha Delaware, shirkadaha Wyoming, bannaanka / shirkadaha caalamiga ah iyo Shirkadaha Kanadiyaanka ee la heli karo. Shirkadaha noocan ah ee ugu qiimaha badan sida ugu dhakhsaha badan ee loo helo iyo ganacsi loo dhiso waxay noqon karaan shirkadaha shelf. Shirkadaha sidoo kale ka jira dalkan kuwaas oo horeyba u lahaa dhibco dhibco shirkadeed iyo xiriir xiriir la leh deyn bixiyaasha, in kasta oo shirkadahaani ay badanaa yihiin hay'ado ka shaqeeya firfircoon.
Shirkadaha Incorporated waxay wata xirmo gaar ah oo ay kujirto shirkad duqoobay oo lagu darey barnaamij aan ku dhisi karno dhibcaha shirkada Dun & Bradstreet iyo hay'adaha kale ee qiimeynta deynta. Waxaan kuu diyaarin karnaa xiriir lala yeelanayo amaah-bixiyeyaasha, marka la oggolaado, waxay gacan ka geysan karaan diyaarinta buundada loogu talagalay ballaarinta ganacsiga, sahayda ganacsiga, iyo iibsashada guryaha.
Barnaamij kale oo la heli karo waa tababbarka dhismaha, la-tashiga iyo barnaamijka dhisitaanka deynta dheeriga ah. Waxaan qabanqaabin khabiiro khibrad maal gashanaya oo khibrad leh oo kasbaday $ 1 milyan oo magangalyo doon ah si uu ugu yimaado magaaladaada labo ilaa seddex maalmood oo loo bixiyo barnaamij tababbarka degdegga ah. Tan waxaa ka mid ah falanqaynta guryaha, soo bandhigidda guryaha, haddii maalgelin munaasib ah la heli karo, iyo muujinta sida loogu maalgeliyo guriga sida ugu yar ee suuragalka ah ee macaamil ganacsi.
Cinwaankii hore ee boggan, oo tixraacaya shirkadaha waaweyn ee da'da ah ee leh amaahda aasaasiga ah iyo khadadka amaahda ee jira ayaa loo meeleeyay ujeedo SEO sababtoo ah baaristayadayadu waxay muujisay inay jiraan baaritaanno fara badan muddadaas. Waxaan dhawaan u beddelnay cinwaanka si aad ugu dhow uga tarjumeyso mawduuca bogga. Fiiro gaar ah: Barnaamijka hoos looga hadlay ma aha mid la heli karo oo keliya tixraac.
Shirkaddayada da 'weyn ee leh Xidhmada Caawimaadda Lacagta ayaa waxaa ka mid ah waxyaabaha soo socda:
Caawinta helitaanka dhibco ee Real Estate, badanaa $ 1 milyan ugu badnaan - Waxaad heli doontaa shirkad ama LLC. Waxaad soo gudbineysaa soo-jeedin iibsi hanti ma guurto ah oo maalgelin ah. Waxaad awoodaa, adoo tixraacaya oggolaanshaha amaahda, waxaad heli kartaa illaa $ 1 milyan oo amaah ah oo aamin ah oo ku saabsan amaahda guryaha ugu horreeya ee hay'ad deyn bixisa. Intaas waxaa sii dheer, waxaan xiriir la leenahay deyn-bixiyeyaal badan oo gaar ah oo raba inay amaahiyaan shirkadaha iyo sidoo kale shaqsiyaadka. Dabcan, amaahiyuhu marka hore wuxuu u baahan doonaa inuu hubiyo in qiimaha hantida uu taageeri doono qadarka amaahda iyo in deynta ay aamin u tahay deyn-bixiyuhu iyada oo loo marayo qoraal-hoosaad la oggolaaday ka hor inta aan la bixin lacag kasta. Sida qof kastoo caqli gal ah uu fahmi karo, lahaanshaha shirkad ama LLC, lafteeda, uma suuragasho mid inuu lug ku galo hay'ad maaliyadeed oo lagu xoojiyo biilasha dollarka. Marka, tababaraasheena ayaa si fudud kuu baraya sida loo maalgaliyo dhismaha guryaha iyo sida loo yeesho lahaanshaha guriga ee magaca shirkaddaada. Shabakadayada iyo la-hawlgalayaashayadu waxay diyaarsadeen malaayiin doollar maalgelinta macaamiisha. Annagu ma nihin dillaaliyeyaal guryaha amaahda ah, sidaa darteed kama helno guddiga amaahda. Waxaan si fudud uga caawinnaa diyaarinta amaahda waxaanan kuu gudbineynaa deyn bixiyeyaasha kugu habboon. Sikastaba ha ahaato, si kastaba ha noqotee, majiraan wax la hubo oo ah in waxwalba oo isbadal ah lagu samayn karo. KHUDBADAHA MADAXWEYNAHA WAA KU SAABSAN IN LAGU SAMEEYO AMMAANKA AMAAHANKA LAHAAN (S).
Tababbarka Koowaad - Waxaan u dirnaa khabiir ku kasbaday $ 1,000,000 hanti ma guurtada ah magaaladaada si ay kuu tababaraan sida loo helo amaahda guryaha iyo sida ugu badan ee loogu laabanayo markaad soo maalgashanayso dhismaha guryaha. Tani waa tababar labo ama saddex maalmood ah. Kani maahan tababarka fasalka. Tani waa shaqsi 1-on1 gacmaha-ku-habboon, tababar fool ka fool ah magaaladaada. Tababaraha ayaa kaa raadin doona guryo, wuxuu ku tusi doonaa sida loo wada bixiyo deeqda, sida caadiga ah iyada oo aan lacag yar lagaraacin jeebkaaga, iyo sida ugu lacagta badan ee loo maalgashan karo guryaha dhismaha. Maamulka Shirkadaha Isku-dhafan ayaa soo bandhigayay barnaamijkan tababarka ilaa 1994. Waxaan aaminsanahay in ku saabsan macaamiil kaste oo kaqeybqaatay tababarka hal-hal ah in uu aad ugu qancay. Haddii aad tahay maalgashi cusub oo khibrad leh ama khibrad leh, waxaan kalsooni ku qabnaa inaad aad ugu qanacsan tahay tababarkan hal-hal-hal ah. Waxaad dabooli doontaa khidmadaha safarka Tababaraha. Sababta tani waa in haddii tababaruhu u baahan yahay inuu ka gudbo dariiqa ama uu u safro dalka oo dhan, waxaan rabnaa inaan hubino inaad haysatid qarashka ugu yar mana doonayno inaan qof walba u qoro kharashka sababtoo ah qiimaha safarka ayaa kala duwan. Qiimaha caadiga ah wuxuu noqon karaa lix boqol tikidhada safarka iyo laba boqol oo hoteel iyo cunto ah. Marka, qiimuhu aad ayuu u yar yahay.
Khadad Dheeraad ah oo Dheeraad ah oo Lagu Iibsado Iibsiyadaha Guri La'aanta - Tababar dhisi shirkadeed, kaas oo kugula shaqeyn doona inaad dhisto warbixintaada sumcadda shirkadeed, oo ay kujirto barnaamijka qaabeysan oo leh khad taageero bilaash ah. Tababarahaaga ayaan kaala shaqeyn doonnaa si aad u isticmaasho oo aad u dhisto dhibco dheeri ah baahiyahaaga oo aad u hesho dhibcaha dhibcaha 'Dun & Bradstreet' oo ku saleysan ka qeybgalkaaga saxda ah ee hawsha.
Eeg liistadayada la heli karo Shirkadaha da'da ah halkan.
Ka dib deyn bixiyuhu xaqiijiyo qiimaha hantida lagu dammaanad qaadayo amaahda, oo uu ku ogolaaday macaamilku qaab hawleed hoosaadyo heer sare ah iyo badbaadin ku filan, illaa $ 1 milyan ayaa lagu wareejin doonaa heshiiska ama shey kale oo sugan. Mar labaad, tani maahan dammaanad. Miisaaniyadda waxaa la bixin karaa oo keliya ka dib markii amaahiyuhu oggolaado inuu maalgeliyo macaamil ganacsi oo gaar ah.
Arinta amaahda ayaa waliba loo heli karaa qalab fara badan oo ganacsi, baabuur iyo waxyaabo kale oo loo habeyn karo baahiyahaaga, iyadoo la tixraacayo oggolaanshaha amaah-bixiyeyaasha, taas oo la heli karo iyada oo qayb ka ah barnaamijka tababarka tababarka shirkadaha.
Maalgelinta guryaha waxaa loo heli karaa deggane, ganacsi, dhul ama hanti kale oo la ijaarto iyo sidoo kale hanti ama qalab kale oo sugan.
Tababarahaagu wuxuu ku tusi doonaa sida loo diyaariyo dalabyada la aqbali karo ee lagu iibsanayo hantida adoo adeegsanaya amaahda shirkadaha. Tababaraha ayaa waliba ku tusi doona sida loo diyaariyo dalabyo aan u baahnayn lacag kaash ah.
Shirkadda ama LLC ma lahaan doonaan lambarada Dun & Bradstreet (D&B) iyo dhibcaha "Paydex®"?
Haa. Lambarka AD & B, soo gudbinta dhibcaha Paydex iyo barnaamijka dhisidda amaahda shirkadaha waa qeyb ka mid ah barnaamijyada taageerada khadadka amaahda dheeriga ah. Waxaa lagu meelaynayaa macalin deyn shirkadeed oo inta badan shaqadiisa ku qabta barnaamijka dhismaha amaahda.
Ma u isticmaali karaa lacagaha sidii aan doono?
Waxay kuxirantahay waxaad rabto. Haddii macaamilku u yahay mid macno u samaynaysa labadiinaba iyo dayn-bixiye oo uu ku dhexjiro cabiraado badbaado macquul ah, haa. Lacagta waa la soo diri doonaa, iyada oo ay ku xiran tahay oggolaanshaha amaah-bixiyeyaasha, oo loo yaqaan 'escrow' si loo iibsado shay ay ka mid yihiin hanti maguurto ah ama waxaa lagu siinayaa shirkadda ama LLC aad ka iibsaneyso waxyaabo kale. Amaahiyuhu wuxuu leeyahay dabacsanaan weyn laakiin deyn bixiye guuleysta ayaa si indho la’aan ah taleefan kula xiriiri doona hal milyan oo doollar isagoo aan marka hore u fiirsan inuu hubiyo inay jirto qiimo kufilan oo lagu ilaaliyo amaahda marka lagu daro falanqaynta shuruudaha kale ee amaah-bixinta. Dhamaan ama ku dhawaad ​​dhammaan macaamiisha raacday tilmaamaha lagu baray tababarka hal-hal-ka ah oo raacay talooyinka waxay awoodeen inay helaan qaab maalgelin ah.
Miyaan deynsan karaa lacag anigoon istcimin amaahdaydu?
Haa. Dhibcaha amaahda ee sugan ee hantida maguuraanka ah waxaa caadiyan la heli jiray iyada oo la adeegsanayo 100% amaahda shirkadaha iyada oo aan loo eegin dhibcaha amaahda shaqsiyadeed, taas oo kuxiran shuruudaha amaahda. Bedel ahaan, shahaadada qalabka wax lagu qoro ayaa laga yaabaa inuu kugu daro adkaynta shirkada iyo awoodaada si kor loogu qaado awooda amaahda. Caadi ahaan, tani waxay ku xiran tahay amniga amaahda deymiyaha. Waqtiyadi ugu dambeeyay, deyn-bixiyeyaal badan ayaa eegaya qiyaaso aan ahayn amaahda ganacsiga. Marka, waxay kuxirantahay amaah-bixiyuhu.
Sidee adduunka ugu samayn kartaa tan maanta suuqa deynta adag?
Waxaan leenahay deyn-bixiyeyaal, oo sannado badan dhistay shabakado maal-gashadeyaal gaar loo leeyahay oo lacag ku maalgeliya amaahda guryaha. Markaa, intii ay la shaqeyn lahaayeen baananka, deyn bixiyaasheena waxay maalgashadaan deynta qaybinta shabakadeeda ballaaran ee maalgashadayaasha khaaska ah. Mar labaad, waxaan kaa caawinaa diyaarinta amaahda waxaanna tixraacyada amaahda u siineynaa oo keliya adeeg adiga kuu gaar ah. Kama helno guddiyada amaahda.
Ma u isticmaali karaa amaahda shirkadaha si aan u iibsado shirkad ama LLC, barnaamijka deynta ama tababarka dhismaha laga helo adiga?
Maya. Waa inaad ku iibsataa shirkada ama LLC, dhisaha deynta iyo / ama barnaamijka tababarka oo aad ku bixisaan maalgelinadaada.
Ma gelin karaa xoogaa lacag ah jeebkayga?
Waxaa jira qaabab loo sameeyo qaab dhismeedka ganacsiyada guryaha marka marka ganacsigu xirmayo, waxaad awoodaa inaad jeebkaaga uga soo hesho jeebkaaga iibsashada, inkasta oo tan la hubo. Qaababka loo adeegsado ayaa lagu bari doonaa koorsada tababarka.
Kumaa oggolaaday amaahda iyo ma guurtada ama iibsiyada kale?
Koorsada tababarku waxay ku tusi doontaa sida loo sameeyo dalabyo la aqbali karo oo dayn-bixiyuhu uu ku oggolaado macaamil maalgelinta.
Miyaad i siisaa maal-gashi guryo oo aan iibsan karo anigoo adeegsanaya deynta shirkadeed?
In kasta oo aad u isticmaali karto lacagaha aad ku iibsato wax gabal ah oo la aqbali karo oo ah hanti maguurtada ah, maalgashiyo uu horay u baaray macalinka koorsada badanaa waa la heli karaa haddii la doonayo. Tani waa sida ugu habboon oo keliya oo, looma baahna inaad iibsato guryahaas. Waxaad u isticmaali kartaa lacagaha si aad ugu iibsato guryaha kale ee aad ka hesho marka laga reebo kuwa lagu bixiyo koorsada.
Guri noocee ah ayaan iibsan karaa?
Degaan, qoys keliya, qoys aad u tiro badan, ganacsi, dhismooyin, dhul cayri ah, qoys kali ah, saadaasha, horumarka, dhaqancelinta oo ay ku jiraan agabyada la xiriira iyo kharashaadka shaqada. Faahfaahinta waxaa lagu bartaa koorsada tababarka.
Miyaan heli karaa maalgelin 100% aniga oo aan jeebka ka qaadin lacag caddaan ah?
Haa. Qaababka loo adeegsado maalgelinta 100% waxaa lagu bartaa koorsada tababarka. Qaababka kale ayaa loo dhigaa halka looga baahan yahay lacag-bixin hoose, mid adiga ama mid ka mid ah la-hawlgalayaashaada.
Miyaan heli karaa intaa ka badan $ 1 milyan oo amaah ah?
Ugu sarreyn bilowga barnaamijkeenna waa $ 1 milyan, oo ku xiran dib-u-eegista qiimaha hantida maguurtada ah iyo qaab-bixiyeha wax-ku-qoritaanka hoostiisa. Tababbarka markaad raacdo waxaad baran kartaa sida loo kordhiyo lacagta la amaahan karo.
Waa maxay qiimaha dulsaarku?
Waa isku jawaab haddii qof uu ku weydiin lahaa, “Immisa qaali ah ayuu baabuurku ku kacayaa?” Waxay kuxirantahay. Waxay kuxirantahay sicirka dulsaarka suuqa iyo halista amaahda. Qoraal ahaan, amaahda khatarta yar, halkaas oo shirkadda ama LLC loo adeegsan doono inay kaa caawiso iibsashada guri aad deganaan doonto, saamiga dulsaarku waa 5-8%. Amaaho halista dhexdhexaadka ah, sida maalgelinta muddada-gaaban ee dayactirka waa 9-12%. Amaahda halista badan waxay noqon kartaa saddex iyo toban illaa afar iyo labaatan boqolkiiba. Khatarta sare waxay noqon kartaa guryaha u dhow aagagga halista ama dhismayaasha khatarta-mudada-gaaban. Waxay kaloo kuxirantahay gobolka ay ku sugan tahay hantida sugida amaahda maxaa yeelay shuruudo dulsaar oo kaladuwan ayaa kajira gobolada kaladuwan. Tirooyinka kore waa tusaaleyaal. Sababta oo ah kaladuwanaanshaha heerka dulsaarka muddo dheer iyo qodobo kale ayaanan u sameynin ballan qaadyo waxa dulsaarka dulsaarka ah ee amaah-bixiyeyaasha (yada) ay mustaqbalka qaadi doonaan.
Ma u isticmaali karaa amaahda si aan ugu kabto guryaha aan hadda haysto?
Haa, tan waa la heli karaa.
Miyaan ka dhisi karaa amaah ah shirkad ama LLC aan horey u lahaa?
Haa, waxaan bixinaa barnaamij halka ay taasi suurta gal tahay laakiin waxay qaadankartaa in ka badan intaas oo waxay ku kici doontaa lacag la mid ah sida iibsashada shirkad jira ama LLC oo leh khadadka amaahda.
Miyaad caddayn kartaa in shirkadaha kale ee macaamiisha ama LLCs loo oggolaaday dhibcaha?
Haa. Waxaa la caddeyn karaa in dhowr boqol oo qaybinta amaahda ah loo sameeyay macaamiisha amaah-bixiyeyaasha. Waxaan ka helnay waraaqo ka yimid hay'adaha amaahda ee oggolaaday deynta maaddada ku saabsan soo jeedinta maalgelinta dhismaha ee ka gudbaya hanaankooda qoritaanka. Dayn-bixiyuhu iyo shabakadiisa ilaha maalgelinta ayaa ka shaqeyn doona sidii loo heli lahaa qiimeyaal la doorbido. In kasta oo qadarka la aasaasay, dabiici ahaan, amaah-bixiyuhu wuxuu u baahan doonaa inuu hubiyo in qiimaha hantida uu gacan ka geysan doono amaahda iyo in deynta ammaan u tahay amaah-bixiyuhu.
Ma haysaa macaamiishooyin kale oo sidan ku guulaystay?
Haa. Mid ka mid ah macaamiisheenna ku sugan Spokane, Washington ayaa ku bilaabay wax aan jirin oo wuxuu noo sheegay inuu dhisay $ 6 milyan oo doolar oo qiimihiisu sarreeyo isagoo raacaya tababarka. Laba macaamiil oo kale oo reer Florida ah ayaa tilmaamay inay ka iibsadeen $ 450,000 qalab ganacsi labadii bilood ee ugu horreeyay. Macaamiil kale wuxuu ahaa sarkaal boolis wuxuuna noqday maal-gashadayaasha guryaha. Macaamiil kale ayaa kasbaday waxbadan oo ka mid ah nashaadaadkii maalgashiga dhismaha guryaha ee aan badnayn intii shaqadiisa ahayd. Caadi ahaan, natiijooyinka way kala duwan yihiin. Barnaamijku wuxuu shaqeyn doonaa oo keliya haddii aad… oo aad tababarka raacdo.
Waa immisa boqolkiiba dadka guuleysta?
Mid ka mid ah tababarayaasha koorsada ayaa noo sheegay in 87.3% macaamiisha soo martay barnaamijyada tababarka ay ku howlan yihiin hal ama dhowr meherado oo kala duwan. Dadka tirada yar ee haray ayaa ku guda jira hawlihii ay ku heli lahaayeen heshiisyada ama ma aysan gelin dadaalkii loo baahnaa sida lagu bartay koorsada.
Ma ku aamini karaa
Haa. Waxaan ka bilownay inaan ka samayno ganacsi 1906 waxaanan si buuxda uga go'naa guushaada. Waxaan kugu leenahay dhiirigelin xoog leh si aad ugu guuleysato saddex arrimood awgood. 1. Daryeelista macaamiisheena ayaa ah waxa saxda ah in la sameeyo. 2. Waxay macno inoogu sameysaa ganacsiga maxaa yeelay ganacsigayaga badankood wuxuu kujiraa hadal afcelinta afka ah macaamiisha faraxsan. 3. Markaad faraxsan tahay waxaad u badan tahay inaad noqotid macaamiil soo noqnoqda. Hadafkayagu waa inaanu qancino baahiyahaaga oo aan xiriir dheer la lahaano adiga. Taasi waa sababta aan si buuxda uuga shaacinayno in deeq-lacageedka uu ku xiran yahay mid ka mid ah amaah-bixiyeyaashayada la xiriira oo oggolaanaya macaamil ganacsi oo dammaanad qaadeyno maaliyadna aan ku heli doonno macaamil ganacsi gaar ah.
Tusaalaha dhabta ah ee macmiilka jira
Fadlan dhagsii xiriirinta si aad u hesho tusaale dhab ah oo ku saabsan sida mid ka mid ah macaamiisheenna badan ay mid mid u isticmaaleen Shirkadaha guryaha ee shelf oo wata amaah iyo / ama shirkadaha dhowaan la sameeyay inay kasbadaan $ 300,000 macaash ka dhan macaamilkiisii ​​ugu horreeyay.
Maxaan ka baran doonaa Koorsada Tababarka ee Shirkadda lala Xariiriyey?
Shirkadda shelf oo leh Koorsada Tababarka Deynta
Ma haysaa Imtixaanno ka yimid Macaamiisha jira?
Haa, fadlan dhagsii fiidiyowga hoose waxaadna arki doontaa arday dhab ah oo adeegsaday barnaamijka buundada iyo ardayda ka qeyb qaadatay koorsooyinka. Kani waa isla fiidiyowgii aad soo aragtay adigoo gujinaya xiriirka kor ku xusan oo aad ugu dhaadhac qaybta qaybta markhaatiyada.
Waxaan haystay hanti gaar ah oo aan rabo inaan iibsado. Barnaamijkaagu ma u shaqeyn doonaa?
Kaliya wax ku saabsan macaamil ganacsi oo kasta oo guryaha kireeya ayaa lagu maalgelin karaa barnaamijkan haddii ay jirto nabadgelyo ku filan oo lagu taageero deynta oo ay la kulanto shuruudaha amaahda. Mid ka mid khaladaadka ugu weyn ee maal gashadayaasha guryaha ahi uu sameyn karo, si kastaba ha noqotee, waa inuu ku jeclaadaa hal hanti. Qaar badan oo ka mid ah maalgashadayaasha guryaha ugu guulaha badan waxay sameyaan dhowr dalab toddobaad kasta.
Waxa barnaamijkeenu sameyn karo waa inaan kuu sheegno haddii heshiisyada maskaxda aad ku jirtid ay yihiin ama aysan ahayn faa'iidadaada. La-taliyaha khibradda leh ee la socda barnaamijka ayaa kaa caawin doona inaad kala saarto wanaagga wixii aan wanaagsanayn macaamil ganacsiyeed ee guryaha. Intaas waxaa sii dheer, koorsada tababarka ayaa kuu sheegaya halka aad ka heli karto macaashka ugu macaashka badan iyo sida ugu habboon ee loo qaabayn karo deeqahaaga.
Macaamiil waayo-aragnimo leh oo aad u cusub ayaa si joogto ah u sheegaya inay ka helaan faa'iidooyin waaweyn xagga tababarka iyo la-tashiga. Waxaan kugula talineynaa inaad fiirsato koorsooyinka tababbarka DVD-ga ah ama aad ka qeybgashid koorsooyinka tooska ah ka hor intaadan isticmaalin waqtiga latalinta si adiga iyo lataliyahaagu aad u wada joogtaan isla bog.
Farqiga u dhexeeya tani iyo qaab-amaahda caadiga ah waa sida soo socota: Marka la raaco xariijin dhaqameed amaah ah qiimeyn iyo falanqayn badbaado deyn ayaa la sameeyaa ka hor intaan la soo bixin khadadka amaahda. Si kastaba ha noqotee, barnaamijkan, maadaama hantida loo soo bandhigo amaah-bixiyuhu ka dib marka la soo bandhigo amaahda shuruudaysan, qiimeynta iyo falanqaynta badbaadada amaahda ayaa la sameeyaa ka dib, iyo qayb ka mid ah amaahda la heli karo waxaa loo qoondeeyay mashruuc gaar ah haddii ama goorta qiimeyntu iyo falanqaynta amniga amaahda ayaa u fiican amaah-bixiyuhu.
Dhibcaha amaahda shaqsiga miyey ku lug yeelan doonaan?
Dhibcahaada amaahda shakhsiga ah daruuri maahan inay qeyb ka tahay nidaamka oggolaanshaha. Haddii qalab-hoosaadku uu weydiisan karo, waxaa laga yaabaa ama uma badnaan ujeeddooyinka u qalmidda amaahda maadaama ay tahay xaqiijinta daacadnimada qofka maamusha shirkadda ama LLC. Si kale haddii loo dhigo, haddii madaxweynaha ama maareeyaha shirkadda ama LLC uu leeyahay sumcad xumo micnaheeda ma ahan mid saameyn ku leh oggolaanshaha amaahda, taas oo kuxiran shuruudaha amaahda. Si kastaba ha noqotee, haddii qofka maamusha shirkadda ama LLC uu leeyahay hannaan joogto ah oo ku saabsan wax isdaba marinta khiyaanooyinka taasoo ka dhalatay xukunnada been abuurka ah ee warbixinta amaahda markaa waxay u badan tahay inay tahay arrin daacadnimo. Markaa, deynta shaqsiyadeed ee xun ayaa laga yaabaa ama ma yeelan karto culeys saa'id ah, taas oo kuxiran shuruudaha dayn bixiyaha, laakiin caadiyan dhaqan xumada ayaa leh. Waqtiyadi ugu dambeeyay amaah-bixiyeyaashu waxay aad uga walaacsanaadaan kalsoonida shaqsiyeed ee milkiilaha shirkada marka loo eego kuwii hore.
Muddo intee le'eg ayay qaadataa in laga helo maaliyad lacageed?
Isla markii la amaahdo ku qanacsanaanta in ay jirto badbaado ammaah oo ku filan oo dayn-bixiyuhu uu diyaar u yahay inuu maalgeliyo macaamilka. Kama sameynno ballanqaad waqtiga ay qaadan doonto in la xiro deyn, hase yeeshe, amaahda waxay u muuqataa inay si dhakhso ah u xirayso amaah bixiyeyaasha dhaqanka. Waqti kufilan ayaa loo baahan yahay si loo falanqeeyo macaamilka amniga amaah-bixiye. Xusuusnow inaad naftaada siiso waqti ku filan si ay amaah-bixiyuhu u qabto dadaalka loo baahan yahay. Amaahiyuhu kama dhaafi doono nidaamka nabadgeliyada amaahda ee loo baahan yahay si fudud sababtoo ah waxaad tahay dhaqso. Iyaga ma illoobi doonaan qoraalka hoostiisa maxaa yeelay waxaad waayi doontaa macaamil ganacsi haddii aysan lacag ku bixin jadwalkaaga. Kuma xadgudbi doonaan tilmaamaha amniga maxaa yeelay waxaad lumin doontaa lacag ku qarash gareysay lacag dhab ah, qiimeyn ama waxyaabo kale. Way maalgalin doonaan markay ku qancaan amniga amaahda iyo goorta amaahiyuhu ku qanco inay aamin tahay in la maalgeliyo macaamil ganacsi. Marka, sii naftaada waqti ku filan oo xiritaan ah si aad ugu oggolaato baahidan.
Halkan waxaa ku yaal tusaale ah hanti in
waxaa lagu maalgeliyey mid ka mid ah macaamiisheena.
Bandhig ayaa loo sameeyay halka
amaahda shirkadeed waxay bixisaa lacag caddaan ah amaahda koowaad.
Iibiyaha guriga wuxuu soo celinayaa amaahdii labaad. (Waxaan ku siin karnaa tusaalooyin qandaraas ah oo muujinaya sida loo bixiyo dalabyadaas marka aad iska diiwaangelinayso barnaamijkayaga.)
Deynta amaahda ugu horreysa waxay ahayd 50% qiimaha iibsashada. (Ilaa 80% ee qiimaha waxaa lagu maalgelin karaa duruufaha saxda ah iyo haddii deyn-bixiyuhu uu dareemo in amaahgu amaan yahay.)
Deynta amaahda labaad ee la siinayo iibiyaha wuxuu ahaa 50 kale ee qiimaha iibka.
Macaamiisha amaahdu waxay awood u yeesheen inay iibsadaan guriga wax yar ama lacag la'aan ah
Halkan waxaa ku yaal tusaale ah heshiiska kireysiga guryaha oo macquul ah
oo aan lacag lagu maalgelin:
Qiimaha iibka $ 500,000
Macmiilku wuxuu doonayaa inuu amaahdo
dhan $ 500,000
Macmiilku sidoo kale wuu doonayaa
amaahdo $ 150,000 si loo hagaajiyo guriga.
Marka, macmiilku wuxuu doonayaa inuu amaahdo
$ 650,000 on $ 500,000 qiimaha iibsashada.
Macmiilku wuxuu leeyahay hantida
waa "qiimayn" $ 1 milyan. Hantida ayaa laga yaabaa inay ku kacayso $ 1 milyan aragti ahaan. Laakiin
qiimaynta waxaa lagu sameeyaa qiimaha dhabta ah ee maaha waxa ay tahay “waa inay” ahaato. Marka, iibsigan, waxaan hadda haysannaa a
isbarbar dhiga $ 500,000 ee suuqa oo ay guryaha kale ee kujiraan
aagga waa la qiimayn doonaa. In kasta oo anaga oo ah maalgeliyeyaasha aan ku doodi karno qodobkan
ilaa aan wajiga buluug nahay, deyn bixiyeyaashu badanaa waxay amaahda ku saleeyaan hoose
waxa qiimaynta la qiimaynayo ama qiimaha iibka ee mustaqbalka la fiirin doono ee aan ahayn sida aan u maleyno in qiimaha iibsigu noqon karo ama uu noqon karo. Tan maahan in aysan jirin waxyaabo ka reeban
xeerkan; laakiin filayaan qaanuunkan inuu ku raaco amaah bixiyuhu inbadan
Kalsoonida La-xoojiyay - Marka la xayeysiinayo, kalsoonida macaamiisha ayaa la xoojiyaa marka hadalada sida "Shirkaddeenu ay jirtay ilaa…" Tani waa ahmiyad run ah markii aad runtii ku hawlantahay ganacsiga warshadaha gaar ahaan waqtiga loo cayimay halkii aad ka ahayd tirada sanado shirkad ayaa kusugnayd shelf.
Deynta Shirkadaha - Mararka qaarkood way sahlan tahay markii la aasaasto amaahda bangiyada, alaab-qeybiyeyaasha, maalgashadayaasha iyo maal-gashadayaasha maal-gashadayaasha inay yeeshaan shirkad duug ah. In kasta oo ay tani noqon karto mid yar oo ka mid ah kuwa kale, haddana qodobo muhiim ah oo muhiim ah, sida deyn-bixin iyo faa'iidooyin. Sida ganacsi kasta oo dhowaan la soo gaarey, waxaan kugula talineynaa siidayn buuxda in aad dhowaan heshay hay'ad da 'ah.
Shirkadaha Incorporated waxay wataan liiska shirkado la aasaasay oo diyaar u ah iibsashada degdega ah. Shirkadaha waxaa lagu iibiyaa marka ugu horaysa, oo loo adeegsaday saldhigga koowaad. Waxa jira shirkado diyaarin kara akoonno bangi iyo khadadka amaahda. Waxa laga yaabaa inaanu haysanno ama lahayn shirkado noocan ah oo la heli karo. Shirkaduhu way ka madax banaan yihiin canshuur ama qaanis sharci ah. Hal ka reeban waxaa ka mid noqon kara shirkadaha California ee ay khidmadda sannadlaha ah u dhiibto ruqsad u sheegashada.
Tababaraha tababbaraha koorsada guryaha wuxuu leeyahay macaamiil fara badan oo ku lug leh hal ama dhowr xawaalado guryaha iyadoo la isticmaalayo shirkadohooda laga helay adeeggeena. Mid ka mid ah qaybaha ugu waaweyn ee barnaamijka waa waxbarasho. Waxaan bixinaynaa shirkad ama LLC iyo tababaro ku saabsan sida loo isticmaalo si loo iibsado guryaha dhismaha. Barnaamijkena waa mid gaar ah, aqoonteena, barnaamij isku mid ah ayaan soo bandhigin hay'ad kale.
Waxaa jira kharashyo aan kugu soo qaadno annagoo adiga ku mataleyna markii aan ku siino hay'ad ama LLC iyo tababbarka iyo la tashiga. Sababta oo ah kharashyadan aan dib loo soo noolayn karin waa alaab aan la soo celin karin. Si loo fuliyo qaar ka mid ah codsiyada amaahda, amaahda waxaa loo gudbin karaa dhinacyada saddexaad. Amaahda lagu fuliyay dhinac saddexaad ayaa laga yaabaa ama uma baahan karo isticmaalka shirkadda lagu soo iibsaday barnaamijkan. Waxaan ku dadaali doonnaa inaan qancinno baahiyahaaga sida ugu wanaagsan ee awooddeenna ugu jirto illaa heer barnaamijkayagu qabo.
Shirkadaha Incorporated waxay sidoo kale bixin karaan xafiis qaabeyn kara gudaha iyo gobolka Mareykanka iyo xukuudo badan oo shisheeye oo ay kujirto cinwaan ay kujiraan boostada, lambarka taleefanka iyo lambarka fakiska. Tan waxaa loogu talagalay dadka doonaya inay ganacsi yeeshaan laakiin aan rabin inay u isticmaalaan cinwaankooda guryahooda ganacsigooda.
Waxaan sidoo kale u samayn karnaa koonto bangi Mareykanka ama ka baxsan ee shirkadaada ama LLC. Waxaad khadka tooska ah ugu geli doontaa akoonkaaga sidoo kale kaarka deynta. Lacag yar, waxaad u istcimaalaysaa kaarkaaga amaahda wax iibsashada. Lacag aad u badan, waxaad u adeegsan doontaa adeegga internetka ee bangiga iyo lacagta taleefanka kuwa aad rabto inaad ka iibsato. Shirkadaha Incorporated waxay siinayaan waraaqda loo baahan yahay “Uqalma Barista” bangiyada si akoonkaaga loo dhiso adiga la'aantiis. Caadi ahaan, waxaan kugula talineynaa u hoggaansamid sharci oo buuxda iyo qareen sharci iyo canshuur qareen iyo xisaabiye.
Shirkaduhu waxay si joogto ah dib-u-fiiriyaan una booqdaan baananka maxalliga ah iyo kuwa ka baxsan xeebaha iyo shuruucda ka mid noqoshada. Waxaan xiriir la leenahay baananka adduunka oo dhan waxaanan dejin karnaa qorshe ku habboon baahidaada shaqsiyeed. Qiimaha guryaha iyo barnaamijyada amaahda guryaha ayaa dabiiciga ah Marka, macmiil ahaan waad fahantay kuna raacsan tahay in barnaamijkena bedeli karo ogeysiis la'aan. Waxaan ku bixinaa adeeg hoos imaad barnaamijkan mudo hal sano ah balanta, hadba sida la heli karo.
Si aad u dalbato a Shirkadda da 'weyn or Shirkadda shelf (sidoo kale loo yaqaan shelf corps leh deyn la aasaasay or shelf corps leh amaah barnaamijka ama shelf corps leh khadadka amaahda or Shirkadaha da'da ah oo leh shirkad la aasaasay Paydex TM Dhibcaha), fadlan soo wac 1-888-444-4412, ama caalami ahaan + 1-661-310-2688 oo la hadal mid ka mid ah takhasuslayaashayada oo si farxad leh kuu caawin doona. Fadlan soo wac Isniinta illaa Jimcaha inta u dhaxeysa saacadaha 7: 00 AM iyo 5: 00 PM Waqtiga Pacific.